Onyenwe nke Mgbaaka: Agha nke Ihe nkiri Anime Rohirrim na Ọrụ - Pop Omenala
Onyenwe nke Mgbaaka: Agha nke Ihe nkiri Anime Rohirrim na -abịa n'ụlọ ihe nkiri
Oge ngwụcha nwere mụtara na New Line Productions na -ejikọ aka na Warner Bros. Animation maka mwepụta ihe nkiri nke ihe nkiri anime na -abịa. Onyenwe nke Mgbaaka: Agha nke Rohirrim .
Peter Jackson na Fran Walsh, ndị duo n'azụ Onyenwe nke Mgbaaka trilogy, ga -etinye aka na ime ya Agha nke Rohirrim , mana onye na -ede akwụkwọ ibe ya Philiphi Boyens etinyelarị n'ọrụ a dịka onye ndụmọdụ. Onye na -agba Blade: Black Lotus na Ghost na Shell: Guzo Nanị Mgbagwoju ) ga -eduzi, ya na Jeffrey Addiss na Will Matthews na -ede edemede ahụ.
Agha nke Rohirrim ga -eje ozi dị ka ibe ibe prequel na Onyenwe nke Mgbaaka trilogy na ilekwasị anya na ebe ewusiri ike nke Helms Deep, ebe ọ na -elekwa anya na Helm Hammerhand, Eze Rohan.
Anyị niile nọ na New Line na -enwe mmekọrịta chiri anya maka ụwa pụrụ iche J.R.R. Tolkien mepụtara, yabụ ohere ịlaghachi azụ na Middle-earth na ndị otu nọ na Warner Bros. Animation bụ nrọ mezuru, Warner Bros. na New Line kwuru na nkwupụta.
gịnị kpatara mkpịsị aka etiti ji dị njọ
Ndị egwu mara Helms Deep dị ka ebe otu n'ime agha kachasị ukwuu etinyegoro na fim yana, yana ọtụtụ ndị ọhụụ ọhụụ gụnyere Kenji Kamiyama mara mma n'isi, anyị enweghị ike nwekwuo obi ụtọ ịnye ọhụụ ọhụụ nke akụkọ ya. ga-akpọ ndị na-ege ntị zuru ụwa ọnụ ka ha hụ ọmarịcha ihe mgbagwoju anya nke Middle-earth n'ụzọ ọhụrụ na-atọ ụtọ, nkwupụta ahụ gara n'ihu.
Agha nke Rohirrim agaghị etinyekwa aka na Amazons na -abịa Onyenwe nke Mgbaaka usoro, nke atọrọ n'oge afọ nke abụọ, na -emegide ebe ihe nkiri anime nọ n'afọ nke atọ. N'April, ọ bụ kọrọ na akwụkwọ ahụ ga -efu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara ijeri dollar mgbe usoro nkwanye ugwu nọrọ $ 250 nde naanị iji nweta ikike.
Edebere usoro Amazon maka mwepụta ngwụcha 2021.
ndị egwuregwu 20 kacha elu na nba
achicha strawberry na achicha nri mmụọ ozi
ego ole bu nike air mags